Rita, Writing for My Sake!: မျိုးငြိမ်းဆွေ - ကြည်လင်သော ရေ မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုတိုများ
မျိုးငြိမ်းဆွေ - ကြည်လင်သော ရေ မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုတိုများ
၁) လကလေး ဝါဝါ (Apr 1991, မြားနတ်မောင်)
၂) နှင်းမြူပင့်ကူအိမ် (Feb 1991, ပေဖူးလွှာ)
၃) ကြည်လင်သော ရေ (Jan 1995, ရွှေအမြုတေ)
၄) ရွှေပြည်အေးအိပ်မက် (အမှတ်-၅ 1990, ဒီရေစီးသံ)
၅) ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းပေါ်က ည (Sept 1995, ပိတောက်ပွင့်သစ်)
၆) ကြေးရည်သောက်တဲ့ ည (Apr 1996, ပန်းဝေသီ)
၇) ဃ နှင့် ဘ ကိုသောက်ခြင်း (July 2005, ရွှေအမြုတေ)
၈) မိုးကြိုးပြင် (Mar 2005, ရွှေအမြုတေ)
၉) လွမ်းပိုမှာ ချာချာလည် (Jan 2005, အင်ပါရာ)
ကြည်လင်သောရေ တစ်ပုဒ်ကလွဲလို့ ဘာမှ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ ဝတ္ထုတိုတွေ။
2008 September ကတည်းက ထွက်နေတဲ့ စာအုပ်။
"... တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီညမှာများ အမေ တရေးနိုးပြီး ကျွန်တော်သတိရနေသလိုပဲ ဟောဒီအချိန်မှာ သားကြီးကို သတိများရနေမလား။ အမေ့မှာလည်း ပြောစရာတွေ ပြည့်နေမှာပါ။ 'ငါ့မှာ သမီးမိန်းကလေး မရှိတော့ မင့်ပဲ မိန်းကလေးသဘောထား တိုင်ပင်ရမှာ' ဆိုပြီး အဖေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စ၊ မိသားစုကိစ္စ၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ ကျွန်တော်နဲ့ တိုင်ပင်နေကြမဟုတ်လား၊ ကျွန်တော် မရှိတော့ အမေ့ရင်ထဲ ပြည့်ကျပ်လို့ နေမှာပေါ့။
အမေနဲ့ စကားပြောချင်တယ်။ ..."
"... တစ်လမ်းတည်းသော အဲဒီ ပေတစ်ဆယ် ကတ္တရာလမ်းကလေးပေါ်မှာပဲ တမာပန်းကလေးတွေဟာ ညဉ့်နက်မှ တိတ်တိတ်ကလေး မွှေးနေကြတာကို ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တာပေါ့။ ဟော အဖေနဲ့ အမေကျတော့လည်း အဲဒီလမ်းကလေးပေါ်မှာပဲ ကိုယ်ပိုင်ထွက်ပေါက်ကလေးတွေ ရှိခဲ့ကြတာပဲ။ ..."
(စာရေးကောင်းတဲ့လူတွေ ရေးတဲ့ စာကို ဖတ်ရရင်၊ တပြိုင်တည်း သူရေးတဲ့စာက ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ထိမှန်နိုင်ခဲ့ရင်၊ အရိပ်အယောင်နဲ့ အရုပ်တွေ မြင်လာရတတ်တယ်။ ဒီထက်မကရင်တော့ ရနံ့တွေပါ ရလာတတ်တယ်။ ဒီစာပိုဒ်ကလေးကို ဖတ်ရတော့ အညာနွေညထဲက ပူပူနွေးနွေးလေထုရယ် လေအလာမှာ ဖုန်နံ့နဲ့ရောပါလာတတ်တဲ့ တမာပန်းနံ့လေးတွေကို ရှူမိတယ်။)
"... အမှန်တော့ အမေ ကျွန်တော်တို့ကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်လောက် မွေးပေးဖို့ ကောင်းတယ်။ အခု ညီအစ်ကိုသုံးယောက်ဆိုတော့ အေးစက်စက် ဖွယ်တယ်တယ်နဲ့ပေါ့။..."
(ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိ။ သား ၃ ယောက် အိပ်မက်ရှိဖူးတယ်။ ဘယ်သူ့ကို အားကျလို့ရယ်လို့ မဟုတ်ဘဲ၊ ဘာမှန်းမသိဘဲ လိုချင်ခဲ့ဖူးတာ။ (ခုတော့ မရှိတော့ဘူး။) နောက် ကိုယ်သဘောတကျရှိတဲ့ လူအများစုမှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သား ၃ ယောက်စီရှိတတ်ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခု သူတွေးတဲ့ထောင့်က တခါမှ မတွေးဖူးခဲ့ဘူး။)
"မစံနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကတော့ ကျယ်နေပြန်ပါပြီ။"
ရှေ့မှာ ရှင်ငြိမ်းမယ်ရဲ့ ကျွမ်းထိုးကောင်အိုင်ချင်းတစ်ပုဒ် ရွတ်တဲ့အပြ၊ နောက် အဲဒီ ဟိုက္ကုကဗျာနှစ်ပုဒ် တလှည့်စီရွတ်အပြီးမှာ ညှပ်ထည့် သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးက အတော်လှတယ်။
အဲဒီဝတ္ထုကို အွန်လိုင်းမှာ စဖတ်မိတော့ ဘာဖြစ်လို့ မကြိုက်မိပါလိမ့်။
"... မွန်းကျပ်ရှတတဲ့ အိပ်မက်တွေကို မြင်မက်ရဖန်များတော့ ကြည်လင်ရှင်းသန့်တဲ့ အိပ်မက်လေးကို တမ်းတမိပြီး ခါးသီးအက်ကွဲတဲ့အဖြစ်တွေ ခံစားရတော့ ချိုမြိန်ရှင်သန်ခဲ့ဖူးတဲ့အဖြစ်လေးတွေကို စိတ်ထဲက မြင်ယောင်တမ်းတနေမိတော့တာပါပဲလေ..."
"... အိပ်မက်တစ်ခုပမာပါပဲ။ မနက်မိုးလင်းတော့ ဟိုးဘက်ညမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။
... ခါးသက်သော အရသာကို စားရတော့ ချိုမြိန်သော အရသာကို တမ်းတမိသလို စိတ်ပျက်မွန်းကျပ်တော့ လွတ်လပ်ပျော်မြူးရတဲ့အဖြစ်ကို တမ်းတမိသလို နှစ်သက်မြတ်နိုးသော အိပ်မက်တစ်ခုကို ပြန်လည်မြင်မက်ခွင့် ရဦးမည်ဆိုရင်ဖြင့် ဟောဒီလို ဆောင်းချမ်းမြမြမှာ ရွှေပြည်အေး "တစ်ငါးလေး" ထဲကို ကွေးကွေးကလေး ဝင်ရောက်အိပ်စက်ချင်သေးသည်။ ..."
စန္ဒယားချစ်ဆွေ သီချင်းတစ်ပုဒ်က စာသားတစ်ကြောင်းကို ကြားရတိုင်း၊ ကြားရတိုင်းမှာ စိတ်က အတိတ်တချိန်ကို ပြန်ပြေးတယ်။ ပြီးခဲ့တာတွေကို ပြန်ရချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာမှ မသိမမြင်တတ်ခဲ့တဲ့ ရှင်းလင်းသန့်စင်မှုကို ပြန်တမ်းတမိရုံပါပဲ။ ဘယ်တော့မှလည်း ပြန်မရတော့ပါဘူး။ ပြန်ရရင်လည်း မယူလိုတော့ပါဘူး။ အရိပ်အယောင်တွေမျှသာ ပါပဲ။
'ဃ နှင့် ဘ ကို သောက်ခြင်း' ရဲ့ ဇာတ်ကောင် ၃ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကတော့ ဃကြီးလို့ ငယ်နာမည်တွင်တဲ့ ဟယ်ရီလင်း ပါတဲ့။
'ကြေးရည်သောက်တဲ့ ည' တစ်ပုဒ်ရယ်၊ 2005 မှာ ရေးတဲ့ ဝတ္ထုတို ၃ ပုဒ်ရယ်ကတော့ ရွှေအမြုတေ ပုံစံခွက်ထဲက အတိုင်းပဲ။ နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ကဆို ရွှေအမြုတေမှာ ပါတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို ရွှေအမြုတေ ဆန်နေတော့တယ်။
ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့ ဦးဝင်းငြိမ်း အမှာစာလိုပဲ... သူ့ကို စာဆက်ရေးစေချင်မိတယ်။
'လကလေး ဝါဝါ' လို၊ 'နှင်းမြူပင့်ကူအိမ်' လို၊ 'ကြည်လင်သော ရေ' လို၊ 'ရွှေပြည်အေး အိပ်မက်' လို...
ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ အက်ဆေးဆန်လေ ကောင်းလေပဲ။
Posted by Rita at 9/18/2011 12:21:00 AM
Labels: book, မျိုးဆွေသန်း/ မျိုးငြိမ်းဆွေ
Ya, that's why I told once. I acknowledge him well asagood story writer after reading this book. KLTY is one of my fav romance related essay.
cartoon by APK
မျိုးငြိမ်းဆွေ - ကြည်လင်သော ရေ မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုတိုများ...